IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မ်ာဒယ်- IVA 0.6T
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရခေဲထုတျစကျ , ၂၀,၀၀၀ USD ဒေါ်လာအောက် , Hot
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA0.6T
IVA0.6T 600Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) is produced according to the most advanced technology in 2019.
IVA0.6T 600Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) is researched and produced by Viet An Company. We are the leading company in importing, producing and distributing the industrial machines such as bottle filling machines, bottle blowing machines, water filtration systems, and ice making machines withawide range of capacity, high quality, productivity, and cost saving.
IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ်ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)ကို သုတေသနပြုလုပ်ထားပြီး Viet An ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီက လုပ်ဆောင်မှု မြင့်မားပြီး အရည်အသွေးမြင့်ကာ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ဘူးလောင်းဖြည့်စက်၊ ဘူးလေမှုတ်စက်၊ ရေစစ်ထုတ်စနစ်၊ ရေခဲထုတ်စက် စတဲ့ စက်ရုံသုံးစက်တွေကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ နေရာမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
The machine is used to produce up to 600kgs of tube iceaday, It is widely applied in the food processing industry or the supermarkets, fast food shops, schools, bars, etc.
ရေခဲထုတ်စက်အသေးမှ စက်ရုံသုံးအထိ ဈေးနှုန်းတွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ တွင် https://vietan.vn/may-lam-da-vien
ဝင်ရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။ ဒီစက်က တစ်ရက်လျှင် ရေခဲ ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အစားအစာစက်ရုံတွေ၊ စူပါမားကပ်တွေ၊ အသင့်စားအစားအစာဆိုင်တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ ဘားတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပါတယ်။
IVA 0.6T 600Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New)
IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)
Why should you choose Viet An's Industrial tube ice making machine?
သင်က ဘာကြောင့် Viet An ရဲ့ ရေခဲထုတ်စက်ကို ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?
As an experienced manufacturer in bottled water machinery importing, manufacturing and distributing, we always try our best to apply the most advanced technology (American, European, Japanese technology) into the production. Thanks to our unceasing efforts, we have achievedavariety of honorable prizes and certificates:
Gold Medal - Vietnamese High-Quality Goods awards (2009) for the bottled water product; Gold Medal - Vietnamese High-Quality Goods awards (2009) for the water filtration system;
ရွှေတံဆိပ်- ဗီယက်နမ် ရေဘူးထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ (၂၀၀၉)၊ ရွှေတံဆိပ်- ဗီယက်နမ် ရေစစ်ထုတ်စနစ်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ (၂၀၀၉)
Exclusive brands of “VA” and “USApec” for the industrial tube ice making machine and water filtration system granted by the National Office Of Intellectual Property Of Vietnam on September 10, 2015;
ဗီယက်နမ် မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပေးအပ်သော ရေခဲထုတ်စက်နှင့် ရေစစ်ထုတ်စနစ်အတွက် VA နှင့် USApec ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များ
One of the 100 leading brands in Vietnam in 2015;
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းတံဆိပ် အခု ၁၀၀ ထဲမှ တစ်ခု
ISO 9001:2015 International Quality Control Certificate;
ISO 9001:2015 နိုင်ငံတကာ ကွာလတီထိန်းချုပ်မှု လက်မှတ်
Being recognized by Viet Nam Association for Anti-counterfeiting and Trademark Protection (VATAP) for actively participating in the movement on November 29, 2016.
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဗီယက်နမ်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ် ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။
Each of our products has its specific pros and cons that other products do not have.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီမှာ တိကျသော အဆိုးအကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။
When it comes to modern machinery technology, we often think of products made in the US, Europe or Japan. Therefore, Viet An has imported high-end components from these countries. Therefore, the quality and performance of the machines are always guaranteed.
ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ US ဥရောပ ဂျပန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအကြောင်း စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An မှ ထိုနိုင်ငံများမှ မြင့်မားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို တင်သွင်းပါတယ်။ စက်တွေရဲ့ ကွာလတီနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို အမြဲတမ်း အာမခံပါတယ်။
Besides, we are committed to genuine products. We commit to compensate 100% in case of fake product detection. With the most advanced technology applied, our products help to save the energy and remarkably reduce the manufacturing cost.
ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက စစ်မှန်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။ ပစ္စည်းအတုတွေကို ၁၀၀% အလျော်ပေးပါတယ်။ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေက အင်နာဂျီ ချွေတာနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
သိပ်သည်းပြီး စမတ်ဖြစ်သော ဒီဇိုင်း
In addition to the premium quality, Viet An's machines also have smart and compact designs with stainless steel material, making them always shining like new and easy to clean and maintain, increasing the machine shelf life.
ပရီမီယမ် ကွာလတီအပြင် Viet An ရဲ့ စက်တွေကို စတိန်းလက်စတီနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး စမတ်ဖြစ်ပြီး သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတမ်း အသစ်လိုတောက်ပနေပြီး သန့်ရှင်းရ ထိန်းသိမ်းရ လွယ်ကူကာ စက်ရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို တိုးစေပါတယ်။
The best maintenance policy
အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းပေးမှု ပေါ်လစီ
We offerawarranty period of 12 months andalifelong maintenance that not many suppliers offer. When using our machines, you will have your machines regularly and quickly maintained by our experienced technical team for free,
ကျွန်တော်တို့က ၁၂ လ အာမခံချက်ပေးပြီး တစ်သက်တာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စက်တွေကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ စက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံရှိ နည်းပညာအသင်းမှ အခမဲ့ မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် ထိန်းသိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The liquid and gas separation system that is only available at Viet An.
Viet An တွင်သာ ရရှိနိုင်သော အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်စနစ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ဒီစက်က အင်နာဂျီ ချွေတာပေးနိုင်ပါတယ်။ အရည်နှင့် အငွေ့ ခွဲထုတ်ပေးသော စနစ်က Viet An ရဲ့ တိုးတက်မှု တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး Viet An မှာသာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ရေခဲပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လွယ်ကူစေရန်၊ ဖိအားသိပ်စက်ကို ရေရဲ့ ထိရောက်မှုမှ ကာကွယ်ပြီး ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်း ကြာစေရန် အသုံးပြုပါတယ်။ဒီနည်းပညာကြောင့် ပြွန်စနစ်ကို ပိုပြီး သိပ်သည်းစေကာ ရေခဲထုတ်လုပ်တဲ့ အချိန်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
The compressors are all produced in the foreign countries with the most advanced technology under strict quality control. All our machines need to go throughastrict quality inspection system before using. The use of the new compressor is to control the cooling capacity and energy consumed to help you save energy and increase the shelf life of the products. In addition, the machine is also capable of stable performance, causing less noise.
ဖိသိပ်စက်တွေကို နိုင်ငံခြားတွင် ခေတ်မီသော နည်းပညာနဲ့ ကွာလတီ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ စက်တွေ အားလုံးကို အသုံးမပြုခင် တင်းကြပ်သော ကွာလတီ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဖိသိပ်စက် အသစ်ကို အသုံးပြုခြင်းက အေးသော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အင်နာဂျီစားခြင်းကို လျှော့ချပေးကာ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်ပြီး ပစ္စည်းတွေရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် စက်က တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဆူညံမှုလည်း နည်းပါတယ်။
အခြား ရေခဲထုတ်စက် ထုတ်လုပ်တာတွေနဲ့ မတူညီဘဲ ကျွန်တော်တို့က IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်တွေမှာ ထုတ်လုပ်မှု အဆို့တွေအစား တင်ပို့ထားသော ရပ်တန့်အဆို့တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။
အပြည့်အဝ တည်ဆောက်ထားသော အေးသော တာဝါ
တင်ပို့ထားသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာ
Imported Condenser (100% New) This is an important part in ice making process. It has main function of condensing from gas to liquid. It is recommended to regularly clean the condenser, at least onceamonth to remove the limestone residue, otherwise, the heat exchange will be limited.
တင်ပို့ထားသော အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် စက်(၁၀၀% အသစ်)သည် ရေခဲထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးပါပါသည်။ ဒီစက်က အငွေ့ကို အရည်အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို ထုံးကျောက်အကြွင်းအကျန်ကို ဖယ်ရှားဖို့ တစ်လမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးဖို့ အကြုံပြုပါတယ်။ သို့မဟုတ် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ကန့်သတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။
၆၀၀ ကီလိုဂရမ် လျှပ်စစ်စနစ်ကို ခလုတ် ၁ ခု၊ ကာကွယ်ပေးသော စနစ် ၁ ခု၊ အော်တိုအချိန် အစားထိုးစနစ် စတာတွေနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ အရင်က လူအလုပ်များမှ ရေခဲအတုံးကြီးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ စက်တွေနဲ့ မတူဘဲ ဒီ အော်တို လျှပ်စစ်စနစ်မှာ အော်ပရေတာက ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချဖို့ သယ်ယူရတဲ့ နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာသာ ပါဝင်ရပါတယ်။
ပုံးအားသွင်းမော်တာ- ဓားအဆက်က ၁၀၀% အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Viet An မှ အထူးသီးသန့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံများ
IVA 0.6T 600Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) offers an amazing capacity of energy saving. Let's imagineanew and an old ice making machine with the same capacity, then;
IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)က အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်စွမ်းကို ပေးပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုတူညီတဲ့ အသစ်နဲ့ အဟောင်းရေခဲထုတ်စက်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။
The packaging system offers an amazingly quick and convenient operation. When buying the IVA 0.6T 600Kg Industrial Tube Ice Making Machine (100% New), you will be givenapackaging system.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို တည်ဆောက်ဖို့ ရေခဲစက်မှာ သုံးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သုတေသနပြုပြီး ဒီဇိုင်းဆင်ရပါတယ်။
These ice making machines are produced at our factory at Quang Minh industrial zone, Me Linh district, Hanoi city. With the application of advanced technology, this machine brings an amazingly smooth and stable operation and helps the customers remarkably reduce manufacturing cost and energy. This is the reason why Viet An’s products have higher prices compared to other products.
The product quality is strictly controlled according to ISO 9001:2015 international standard, distributed by Viet An at our branches in Hanoi, Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Buon Ma Thuot, and exported to the Asean countries. We commit to provide our customers with the best products at the most competitive prices.
ပစ္စည်းကွာလတီကို ISO 9001:2015 နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနဲ့အညီ တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားပြီး Hanoi, Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Buon Ma Thuot တို့မှာ ရှိတဲ့ ရုံးခွဲများမှ ဖြန့်ချီပေးပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို အကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေကို ဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့ ရောင်းချပေးနေကြောင်း အာမခံပါတယ်။
Notices when using IVA0.6T 600kg Industrial Tube ice making machine
IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် စက်ရုံသုံးရေခဲထုတ်စက်ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ သတိပြုရမည်များ
IVA0.6T 600kg Industrial Tube ice making machine is fully equipped with smart control buttons so we recommend that you should read carefully the warnings to solve the problems promptly and properly,
IVA 0.6T ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ကို စမတ်ကျသော ခလုတ်များဖြင့် အပြည့်အဝ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြသနာတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက ဖြေရှင်းပေးရန် သတိပေးချက်တွေကို သေချာဖတ်သင့်ပါတယ်။
Change the filter cartridge regularly. Depending on the water intake, the customers can consider changing the filter cartridge every6months to ensure the water quality.
စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်ကို ပုံမှန်လဲပေးပါ။ ရေအရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဝယ်ယူသူတွေက စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်ကို ၆ လ တစ်ကြိမ်လဲပေးပြီး ရေရဲ့ ကွာလတီကို သေချာစေပါတယ်။
Regularly clean the machine, conduct air filters after 15 days of operation to avoid oil drying, engine noise and engine heating.
စက်ကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းပေးပါ။ ဆီခြောက်သွားခြင်း၊ စက်ဆူညံခြင်း၊ စက်ပူခြင်းတွေကို ကာကွယ်ရန် ၁၅ ရက် စက်လည်ပတ်ပြီးတဲ့အခါ လေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေကို ဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်။
For the best performance, make sure to have the machine maintained regularly.
အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် စက်ကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Currently,in the market, there are many counterfeit ice making products. Thus, to avoid buying the wrong products with poor quality, please directly contact us at +84 839 31 31 31 for free consultation. Thank you for being interested in our products.
ယနေ့အခါ ဈေးကွက်မှာ ရေခဲထုတ်စက်အတုတွေ ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အတုတွေကို မဝယ်ယူမိအောင် +၈၄ ၈၃၉ ၃၁ ၃၁ ၃၁ ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ တိုင်ပင်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Hỏi đáp & đánh giá ၆၀၀ ကီလိုဂရမ် ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ဈေးနှုန်း(၁၀၀% အသစ်)